1n4148: सिलिकन सामान्य प्रयोजन डायोड को बारे मा | नि: शुल्क हार्डवेयर
त्यहाँ धेरै विविध अनुप्रयोगहरु संग अर्धचालक डायोड को धेरै प्रकार छन्। रेक्टिफायर डायोड बाट, जेनर को माध्यम बाट, एलईडी लाई प्रकाश को उत्सर्जन गर्न को लागी। यस लेखमा हामी रुचि राख्छौं एक इलेक्ट्रोनिक घटक कंक्रीट, 1n4148 सामान्य उद्देश्य डायोड। यो एक हो कि हामी यसको विशेषताहरु को मामला मा विश्लेषण र हामी सम्भावित अनुप्रयोगहरु को केहि देखाउनेछ।
1n4148 एक हो सानो सिलिकन एकाइ त्यो महान रहस्य लुकेको छ कि तपाइँ जान्नु पर्छ। एक घटक हो कि तपाइँको परियोजनाहरु को लागी धेरै योगदान गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ इलेक्ट्रोनिक DIY मनपर्छ वा एक निर्माता हो ...
1 अर्धचालक डायोड के हो?
2 1n4148 सामान्य उद्देश्य डायोड
2.2 Pinout र 1n4148 को प्याकेजि्ग
2.4 जहाँ एक 1n4148 किन्न
अर्धचालक डायोड के हो?
Un डायोड एक अर्धचालक उपकरण हो यो एक ठोस राज्य स्विच र वर्तमान को लागी एक तरीका को रूप मा कार्य गर्दछ। यद्यपि त्यहाँ अपवादहरु छन्, जस्तै एलईडी वा आईआर डायोड, जो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जन गर्दछ। पहिलो अवस्थामा, केहि रंग को एक दृश्य प्रकाश, वा अवरक्त विकिरण। अर्कोतर्फ, यस लेखमा, जब देखि हामी 1n4148 को बारे मा कुरा गर्नेछौं, हामी केवल ती जो वर्तमान disruptors को रूप मा कार्य मा रुचि राख्छौं।
शब्द डायोड ग्रीक बाट आउँछ, र मतलब "दुई तरिका"। यसको बावजूद, यो के गर्छ ठीक विपरीत छ, त्यो हो, यो अन्य दिशा को प्रवाह को प्रवाह लाई रोक्छ। जे होस्, यदि डायोड को विशेषता IV वक्र सराहना गरिन्छ, यो देख्न सकिन्छ कि यो दुई विभेदित क्षेत्रहरु मिलेर बनेको छ। एक निश्चित सम्भावित भिन्नता तल यो एक खुला सर्किट (आचरण छैन) जस्तै व्यवहार, र धेरै थोरै बिजुली प्रतिरोध संग एक सर्ट सर्किट जस्तै यो माथि हुनेछ।
यी डायोडहरु एक छ संघ अर्धचालक पी र एन को दुई प्रकार को। र उनीहरु संग दुई कनेक्शन टर्मिनल, एक एनोड (सकारात्मक टर्मिनल) र एक क्याथोड (नकारात्मक टर्मिनल) छ। वर्तमान मा लागू गरीएको तरीका मा निर्भर गर्दछ, दुई कन्फिगरेसन भेदभाव गर्न सकिन्छ:
प्रत्यक्ष ध्रुवीकरण: जब वर्तमान प्रवाह बित्छ। ब्याट्री वा बिजुली आपूर्ति को नकारात्मक ध्रुव N क्रिस्टल र इलेक्ट्रोन PN जंक्शन तिर निर्देशित छन् मुक्त इलेक्ट्रॉनहरु repels। ब्याट्री वा स्रोत को सकारात्मक ध्रुव पी क्रिस्टल बाट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन (PN जंक्शन तिर प्वाल धक्का) लाई आकर्षित गर्दछ। जब टर्मिनलहरु को बीच संभावित अंतर अन्तरिक्ष चार्ज क्षेत्र को संभावित अंतर भन्दा ठूलो छ, एन क्रिस्टल मा मुक्त इलेक्ट्रोनहरु पी क्रिस्टल र वर्तमान प्रवाह मा छेद मा हाम फाल्न को लागी पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त गर्दछ।
उल्टो ध्रुवीकरण: जब यो एक इन्सुलेटर को रूप मा कार्य गर्दछ र वर्तमान प्रवाह को लागी अनुमति छैन। यस अवस्थामा, ध्रुवीकरण विपरीत हुनेछ, त्यो हो, स्रोत विपरीत दिशा मा आपूर्ति हुनेछ, इलेक्ट्रोन को वर्तमान पी क्षेत्र को माध्यम बाट प्रवेश र अण्डा मा इलेक्ट्रोन धक्का को कारण। ब्याट्री को सकारात्मक टर्मिनल एन क्षेत्र बाट इलेक्ट्रोनहरु लाई आकर्षित गर्दछ, र यो एक पट्टी उत्पन्न गर्दछ जुन जंक्शनहरु को बीच एक इन्सुलेटर को रूप मा कार्य गर्दछ।
यहाँ हामी डायोड को एक प्रकार मा ध्यान केन्द्रित छन्। कुरा photodiodes वा एलईडी, आदि संग फरक हुन्छ।
यी घटकहरु को सिद्धान्त को आधार मा बनाईएको थियो ली डे वन प्रयोगहरु। पहिलो देखिने ठूलो भ्याकुम वाल्व वा भ्याकुम ट्यूबहरु थिए। Thermionic गिलास ampoules इलेक्ट्रोड को एक श्रृंखला छ कि यी उपकरणहरु को रूप मा सेवा गरीएको छ, तर धेरै गर्मी उत्सर्जन, धेरै खपत, ठूलो थियो, र प्रकाश बल्ब जस्तै क्षतिग्रस्त हुन सक्छ। तेसैले यो ठोस राज्य घटक (अर्धचालक) संग प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरियो।
डायोड, जस्तै 1n4148, छ अनुप्रयोगहरूको भीड। उनीहरु प्रत्यक्ष वर्तमान इलेक्ट्रोनिक सर्किट मा र केहि पनी वैकल्पिक वर्तमान मा धेरै लोकप्रिय उपकरणहरु छन्। वास्तवमा, हामीले पहिले नै देख्यौं कसरी मा बिजुली आपूर्ति तिनीहरूले एक धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य पूरा गरे जब AC बाट DC मा जाँदै। यो रेक्टिफायर को रूप मा तिनीहरुको पक्ष हो, किनकि उनीहरु एक विपरीत दिशा मा वर्तमान लाई अवरुद्ध गरेर दाल को रूप मा एक लगातार एक को लागी एक sinusoidal वर्तमान संकेत परिवर्तन।
तिनीहरू पनि को रूप मा कार्य गर्न सक्छन् बिजुली नियन्त्रण स्विच, सर्किट रक्षक को रूप मा, आवाज जनरेटर, आदि को रूप मा
डायोड वोल्टेज उनीहरु सहन, तीव्रता, सामाग्री (जस्तै: सिलिकन), र अन्य विशेषताहरु अनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। केहि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रकार तिनीहरू छन्:
डिटेक्टर डायोड: तिनीहरू कम संकेत वा बिन्दु सम्पर्क को रूप मा परिचित छन्। तिनीहरू धेरै उच्च आवृत्तिहरु र कम वर्तमान संग उपयोग को लागी डिजाइन गरीएको हो। तपाइँ उनीहरु दुबैलाई जर्मेनियम (थ्रेसहोल्ड ०.२ देखि ०.३ भोल्ट) र सिलिकन (थ्रेसहोल्ड ०.0.2 देखि ०--0.3 भोल्ट) बाट बनाइएको पाउन सक्नुहुन्छ। पी र एन क्षेत्रहरु को डोपिंग मा निर्भर गर्दछ उनीहरु बिभिन्न प्रतिरोध र क्षय विशेषताहरु हुनेछन्।
रेक्टिफायर डायोड: उनीहरु मात्र प्रत्यक्ष ध्रुवीकरण मा ड्राइभ, जस्तै मैले पहिले व्याख्या गरिसकेको छु। तिनीहरू भोल्टेज परिवर्तन वा संकेत सुधार गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। तपाइँ पनि वर्तमान र समर्थित भोल्टेज को मामला मा फरक सहिष्णुता संग, विभिन्न प्रकार पाउन सक्नुहुन्छ।
जेनर डायोड: अर्को धेरै लोकप्रिय प्रकार हो। तिनीहरूले रिवर्स मा वर्तमान प्रवाह को अनुमति दिन्छ र अक्सर नियन्त्रण उपकरणहरु को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। यदि उनीहरु प्रत्यक्ष ध्रुवीकृत छन् उनीहरु एक सामान्य डायोड जस्तै व्यवहार गर्न सक्छन्।
एलईडी: प्रकाश उत्सर्जक डायोड अघिल्लो भन्दा फरक छ, यो के गर्छ प्रकाश बाट विद्युत ऊर्जा रूपान्तरण छ। यो एक electroluminescence प्रक्रिया मा छेद र इलेक्ट्रोनहरु लाई यो प्रकाश उत्पादन गर्न को लागी जब यो प्रत्यक्ष ध्रुवीकरण गरीएको छ को लागी धन्यवाद छ।
Schottky डायोडतिनीहरू छिटो रिकभरी वा तातो वाहक को रूप मा परिचित छन्। तिनीहरू सामान्यतया सिलिकन बाट बनेका छन् र एक धेरै सानो भोल्टेज ड्रप (<0.25v लगभग) द्वारा विशेषता छन्। त्यो हो, स्विच गर्ने समय धेरै छोटो हुनेछ।
Schockley डायोड: नाम मा समानताको बावजुद, यो अघिल्लो एक भन्दा फरक छ। यो PNPN जंक्शनहरु छ र दुई सम्भावित स्थिर राज्यहरु (अवरुद्ध वा उच्च प्रतिबाधा र सञ्चालन वा कम प्रतिबाधा) छ।
चरण रिकभरी डायोड (SRD): यो पनि चार्ज भण्डारण को रूप मा जानिन्छ, र सकारात्मक पल्स को एक चार्ज भण्डारण र sinusoidal संकेतहरु को नकारात्मक पल्स को उपयोग गर्ने क्षमता छ।
सुरंग डायोड: Esaki को रूप मा पनि भनिन्छ, उनीहरुलाई उच्च गति ठोस राज्य स्विच को रूप मा प्रयोग गरीन्छ किनकि उनीहरु nanoseconds मा काम गर्न सक्छन्। यो एक धेरै पतली कमी क्षेत्र र एक वक्र को कारण हो जहाँ नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र भोल्टेज बढ्छ को रूप मा घट्छ।
Varactor डायोड: यो अघिल्लो भन्दा कम ज्ञात छ, तर यो पनि केहि परियोजनाहरु मा प्रयोग गरीन्छ। Varicap एक भोल्टेज नियंत्रित चर संधारित्र को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। यो उल्टो काम गर्दछ।
लेजर र IR photodiode: ती एलईडीहरु जस्तै डायोड हुन्, तर प्रकाश उत्सर्जन को सट्टा, उनीहरु एक धेरै विशिष्ट विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जन। यो एक मोनोक्रोमेटिक प्रकाश (लेजर) वा एक अवरक्त (आईआर) हुन सक्छ।
क्षणिक भोल्टेज दमन डायोड (TVS)- यो बाईपास वा भोल्टेज spikes विक्षेपण र यस समस्या बाट सर्किट को रक्षा को लागी डिजाइन गरीएको हो। उनीहरु इलेक्ट्रोस्टेटिक डिस्चार्ज (ESD) को बिरुद्ध पनि सुरक्षा गर्न सक्छन्।
सुन doped डायोड: उनीहरु डायोड कि सुन परमाणुहरु को उपयोग गरीएको हो। त्यो उनीहरुलाई एक लाभ दिन्छ, र त्यो हो कि उनीहरु लाई धेरै छिटो प्रतिक्रिया छ।
पेल्टियर डायोड: कोषहरु को यस प्रकार को एक संघ को ताप र शीतलन उत्पन्न गर्न को लागी कुन पक्ष मा निर्भर गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। अधिक जानकारी.
हिमस्खलन डायोड: उनीहरु जेनर जस्तै छन्, तर उनीहरु अर्को घटना अन्तर्गत काम हिमस्खलन प्रभाव को रूप मा जानिन्छ।
अरूलाई: त्यहाँ अन्य जस्तै GUNN, स्क्रीनहरु को लागी OLEDs को रूप मा अघिल्लो को रूपहरु, आदि को रूप मा छन्।
1n4148 सामान्य उद्देश्य डायोड
El डायोड 1N4148 यो मानक सिलिकन स्विच डायोड को एक प्रकार हो। यो सबैभन्दा लोकप्रिय इलेक्ट्रोनिक्स को दुनिया मा प्रयोग गरीएको छ। यो धेरै टिकाऊ पनि हो, किनकि यसको कम लागत को बावजुद यो धेरै राम्रो विशिष्टता छ।
नाम निम्नानुसार छ JEDEC नामकरण, र एक रिवर्स रिकभरी समय को साथमा लगभग १०० मेगाहर्ट्ज आवृत्तिहरु को अनुप्रयोगहरु लाई स्विच गर्न को लागी धेरै उपयोगी छ कि सामान्यतया 100ns भन्दा बढी छैन।
टेक्सास उपकरण 1960 मा 1n914 डायोड बनाइएको। एक बर्ष पछि यसको दर्ता पछि, एक दर्जन भन्दा बढी निर्माताहरु लाई यसको निर्माण को अधिकार प्राप्त भयो। १ 1968 In मा १ एन ४१४1 जेईडीईसी रजिस्ट्रीमा पुग्नेछ, जुन समय सैन्य र औद्योगिक अनुप्रयोगहरुमा प्रयोग गर्न थाल्यो। वर्तमान मा त्यहाँ धेरै जो उत्पादन र नाम 4148N1 र 4148N1 अन्तर्गत यी यन्त्रहरु दुबै बेच्ने छन्। दुई को बीच मतभेद व्यावहारिक नाम र थोरै अरु छ। उनीहरु मात्र आफ्नो रिसाव वर्तमान विनिर्देश मा फरक।
Pinout र 1n4148 को प्याकेजि्ग
Movilideas - 50 एकाइहरु ...
1n4148 डायोड सामान्यतया आउँछ DO-35 अन्तर्गत प्याकेज, एक अक्षीय गिलास लिफाफे संग। तपाइँ यसलाई अन्य ढाँचाहरुमा जस्तै सतह माउन्टिंग को लागी एसओडी, आदि मा पाउन सक्नुहुन्छ।
यसको लागि पिनआउट, यो केवल दुई पिन वा टर्मिनल छ। यदि तपाइँ यो डायोड मा कालो पट्टी मा देख्नुहुन्छ, त्यो कालो पट्टी को नजिकैको अन्त क्याथोड हुनेछ, जबकि अर्को छेउ एनोड हुनेछ।
थप जानकारी - डाटा पाना
यसको लागि विनिर्देशहरू 1n4148 बाट, तिनीहरू सामान्यतया छन्:
अधिकतम अगाडि भोल्टेज: 1v देखि 10mA
न्यूनतम ब्रेकडाउन भोल्टेज र रिसाव वर्तमान रिवर्स: 75v5μA मा; 100 100A मा XNUMX V
अधिकतम उल्टो रिकभरी समय: १nsns
अधिकतम शक्ति अपव्यय: M मेगावाट
जहाँ एक 1n4148 किन्न
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने एक 1n4148 डायोड किन्नुहोस् तपाइँलाई थाहा छ कि यो एक धेरै सस्तो उपकरण हो, र तपाइँ यसलाई विशेष इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरु मा वा अमेजन जस्तै सतहहरु मा इन्टरनेट मा पाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यहाँ केहि सिफारिशहरु छन्:
300n1 सहित 4148 डायोड को एक वर्गीकरण संग ब्रीफकेस
25n1 रेक्टिफायर डायोड को 4148 एकाइहरु
50n1 को 4148 प्याक
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू » 1n4148: सबै सामान्य उद्देश्य डायोड को बारे मा